mavara acrylic machira Vagadziri & Vatengesi - China mavara acrylic machira Factory
ruvara acrylic sheet
1) Yakakwira transmittance inosvika 93%;
2) Kurema kwechiedza: isingasviki hafu inorema segirazi;
3) Kunaka kwemamiriro ekunze kusagadzikana nekushanduka uye kushanduka.
4mm acrylic sheet yekicheni
Acrylic jira iri rakareruka, rinopwanya risingagadziriswe thermoplastic. Izvo zvinhu zvakakodzerwa nemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa dzakadai sekuratidzira makesi, kupora mifananidzo, poindi yekutenga, fenicha, zvikwangwani, zvikamu zvakavanzika uye zvimwe zvakawanda.
iridescent acrylic jira
Acrylic Sheets inogona kupihwa muRakajeka, Nhema, Chena, Grey, Bronze, Bhuruu, Dzvuku, Yero, Girini uye nezvimwe. Inogona laser cheka.
Nhema Cast Acrylic Sheet dema epurasitiki zvinhu zvine yakatanhamara simba, kuomarara, uye yakajeka kujeka. Acrylic jira rinoratidzira girazi-senge hunhu - kujekesa, kupenya, uye kujekesa - asi pahafu yehuremu uye kazhinji kacho kushorwa kwegirazi.
Makara acrylic machira. Mukufunga, chero ruvara runogona kugadzirwa. Iwo akajairwa acrylic jira mavara pamusika akakamurwa kuita maviri marudzi: akajeka acrylic sheet uye ruvara acrylic sheet. Bvisa acrylic sheet inosanganisira yakachena yakajeka pepa uye frosted acrylic sheet;